Home > Migrant Communities Library Guide > Somali careers
Akhbaarta ku saabsan Shaqooyinka iyo Xirfadaha
Maktabadda Central Library
Maktabadda Central Library, buugaagta ku saabsan shaqooyinka iyo xirfadahu dabaqa kowaad ayay yaallaan. Lambarka marfishku ugu badnaan waa 650.1 - 650.14. Mawduucyada waxaa ka mid ah qoraallada soo kooba taariikhda waxbarashada iyo shaqada (resumes) ama CVyada, codsiyada shaqada, farsamooyinka la xiriira waraysiga shaqada iyo shaqo-raadinta.
Dadka dhallinyarada ah, qaybta Dhallinyarada Qaan-gaarka ah (Young Adults) oo ku taalla dabaqa Hoose ayay ka heli karaan akhbaar waxtar u leh.
Fadlan maktabad hayaha weydiiso caawimo haddii aad u baahato, maxaa yeelay waxaa dhici karta in mawduucyada isu-xiran qaarkood laga kala heli karo meelo kala-duwan maktabadda gudaheeda.
Buugaagta ku saabsan xirfadaha iyo shaqooyinka waxaa lagu heli kara isla lambaradaas marfishka. Waxyaabaha kaydsan isma beddelayaan tirada oo keliya ayaa yaraan doonta.
Haddii buugga aad rabtid uu maqan yahay uu qof kale qaatay ama uu yaallo maktabad kale, waxaad u baahan doontaa inaad baarto buugga liis-garaynta (catalogue). Lacag $2 ah ayaad buug ku sii-qabsan kartaa, waxaana la keeni doonaa laanta xaafaddaada si aad adigu uga qaadato.
Waxaa aad internetka ugu jira siyaabo kale oo aad akhbaarta muhiimka ah ku heli kartid. Fadlan maktabad hayaha weydiiso caawimo haddii aad u baahato.
Baaridda Buugga liis-garaynta
Waxaa fiican inaad horta baaristaada ka bilowdo shaashada BASIC SEARCH (baarista aasaasiga ah). Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo baarista ah nooca SUBJECT BROWSE (daalacashada mawduucyada) ama KEYWORD (erayga ugu muhiimsan). Haddii aad baarto waxyaabaha hoosta ku qoran si toos ah ayaad u geli doontaa buugga liis-garaynta.
RESUMES (Qoraallada kooban ee taariikhda waxbarashada iyo shaqada) waxaad ku heli doontaa buugaagta ka hadlaya sida loo samaysto CV (curriculum vitae).
APPLICATIONS FOR POSITIONS (Codsiyada jagooyinka shaqada) waxaad ku heli doontaa buugaag ay ku jiraan talooyin, iyo tusaaleyaal camali ah oo la xiriira sida loo samaysto codsi iyo warqad la raaciyoo aad u fiican.
EMPLOYMENT INTERVIEWING (Waraysiyada shaqada) waxaad ku heli doontaa buugaag kaa caawin doona inaad si fiican uga gudubto xaaladda waraysiga shaqada.
JOB HUNTING (Shaqo-raadinta) waxaad ku heli doontaa buugaag ka talo-bixinaya sida loo soo helo shaqo, taasoo ay ka mid tahay shaqo-raadinta internetka gudaheeda.
OCCUPATIONS (Xirfadaha) waxaad ku heli doontaa buugaag ka hadlaya shaqooyinka suurogal ah in la qabto iyo xirfadaha ama aqoonsiyada (qualifications) loo baahan yahay si loo codsado.
CAREER CHANGES (Beddelidda xirfadda) caawimo ayaad ka heli doontaa haddii aad ku tala-jirtid inaad ka tagtid shaqada aad hadda haysid, oo aad is-weydiinaysid sida aad ugu dhaqaaqi kartid.
CAREER DEVELOPMENT (Horumarinta xirfadda) waxaad ku heli doontaa buugaag ku saabsan sida aad xirfadahaaga u casriyayn kartid, ama sida aad xirfadahaaga suuqa u gelin kartid ama u xayaysiin kartid.
Wargeysyada iyo Majalladaha
Maktabadaha dhammaantood waxaa yaalla nuqullo ee Dominion Post. Ugu badnaan jagooyinka shaqada ee bannaan waxaa lagu soo qoraa daabacaadyada Arbacada iyo Sabtida.
Maktabadda Central Library waxaa iyadana yaalla wargeysyo ka soo baxa New Zealand dhammaanteed, oo ay ka mid yihiin NZ Herald, the Press iyo Otago Daily Times.
Waxaad weliba isticmaali kartaa kumbiyuutarrada internetka bilaashka ah leh ee ku yaalla dhammaan Maktabadaha Magaalada Wellington si aad internetka uga akhrisato wargeysyada. Waxaad internetka ka akhrisan kartaa waargeyska NZ iyo wargeysyo kaloo caalami ah. (Halkan riix haddii aad isticmaalaysid kumbiyuutar internet bilaash ah leh ama kumbiyuutar ka baxsan maktabadda).
Websaytyo Waxtar leh
Kumbiyuutarrada internetka bilaashka ah leh ee maktabad kaste yaalla waxaad ka booqan kartaa websaytyada dawladda New Zealand oo ay ka mid yihiin:
Department of Immigration, akhbaar ku saabsan sida NZ looga shaqaysan karo, codsiga waraaqaha ogolaanshaha shaqada iwm.
Career Services Rapuara, Qayb Boqortooyo (Crown Entity) oo ku deeqda akhbaar, talo-siin iyo hagid xirfadaha la xiriira.
KiwiCareers, websayt dawladdu maal-gelisay oo laga helo akhbaar ku saabsan shaqooyinka, shaqooyinka gaarka ah (industry) iyo tababarrada New Zealand gudaheeda, iyo weliba isu-xireyaal kuu tabinaya websaytyo arrimahaas ka hadlaya.
Seek, websaytka shaqada ee New Zealand ugu caansan.
Job Stuff, xayaysiisyada shaqooyinka ee wargeysyada oo internetka la soo geliyo.
New Zealand Government Jobs Online, si loo helo akhbaar ku saabsan sida Hay'adaha Dawladda (Public Service) loogu shaqayn karo.
National Library of New Zealand, isu-xireyaasha internetka xagga shaqada.